Paunenge iwe wafunga kuishandisa | Ota Citizen's Plaza
Paunenge uchishandisa horo hombe, horo diki, nzvimbo yekuratidzira, uye jimunasiyamu
Zvokuvaraidza, uye kana iwe ukashandisa zvivakwa pane zvinovaraidza zvinoonekwa sezvakakodzera pane manejimendi manejimendi, mushure mekunge waunza zvinyorwa zvinotevera mwedzi mumwe pamberi pekutarisira kwezuva rekushandisa seyakajairwa, ndapota enda kuna mabharani nemusangano.
Chirongwa kana kufambira mberi chati, mapepa, chirongwa chekuchengetedza, tikiti yekubvuma (semuenzaniso).
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro, zviitiko muhoro hombe kudhirowa padanho, kujekesa kudhirowa, uye kudhirowa acoustic.
Paunenge uchishandisa iyo yekudzidzira imba, mumhanzi studio, imba yemusangano, yeJapan -style imba, tii kamuri, art kamuri
Kushandiswa kwemoto, nezvimwe. Yaguchi Moto Chiteshi Chekuongorora Chikamu
2-5-20 Tamagawa, Ota-ku Runhare: 03-3758-0119
Security nezvimwe. Ikegami Police Station
3-20-10 Ikegami, Ota-ku Runhare: 03-3755-0110
Ndokumbira utizivise sezvo iwe uchikwanisa kuposita chikwangwani panzvimbo yakatarwa chete pazuva remutambo.
Pazuva rekushandisa, ndokumbira upe fomu yekubvumidza yekushandisa kune yekugamuchira tafura pane yekutanga pasi pevhu usati washandisa kamuri.
Mukugadzirira njodzi, ndapota tora matanho angangoita akadai sekubuda kwevaenzi, kusangana kwekukurumidzira, rubatsiro rwekutanga, nezvimwewo, nekuita musangano wakadzama nevashandi uye nekupa vashandi patsva.
Kune makamuri evacheche pane yekutanga uye yechitatu yepasi pasi, saka ndokumbirawo udza vashandi kana iwe uchida kuishandisa.Ndokumbirawo uzvitonge nemushandisi-wega-kuzvibata.
Mushure mekushandisa, dzosera chakashandiswa nenjodzi michina kune yekutanga mamiriro.Uye zvakare, ndapota ita chokwadi chekutora zvinhu zvako pachako uye usazvisiye munzvimbo iyi.
Kana chivakwa kana chishandiso chakakuvara kana kurasikirwa, iwe uchafanirwa kutsiva zvakakanganiswa.
Ndokumbira utore kumba chero marara zvigadzirwa zvakagadzirwa padariro, senge marara anogadzirwa kubva mukudya nekumwa.Kana zvichinetsa kuenda nazvo kumba, tichazviongorora kuti tibhadhare, saka ndokumbirawo utizivise.
Pane akarongeka akarongeka pane yechipiri yepasi pasi. (Kureba muganho 2m)
Isu tichakupa tikiti yekupaka kumurongi. (Yakatemwa nhamba) Haigone kushandiswa pasina tikiti yekupaka.
Ndokumbira utumire tikiti yako yekupaka pahwindo remotokari yako.
Iko hakuna nzvimbo yekupaka yevazhinji vashandisi.
Murongi anofanira kuona kuti vashandisi vese havauye nemotokari.
Ndokumbira upinde kubva pamusuwo wepamberi pane 1st pasi peiyo nhanho.Ndokumbirawo kuti mushandise erevheta kuti musvike mukamuri yega yega.
Kana iwe ukapinda uchibva kupaka pane yepasi yepasi pasi, unogona kushandisa stair kukwira chishandiso, kunyangwe paine nhanho. (Kurema kusvika ku2 kg) Kana iwe ukatibata nesu pamberi, mushandi achave akamira.
Multipurpose restrooms iri paimba yekutanga yepasi, muhoro hombe pa1st pasi uye padenga rechitatu.